Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Ekukohwa kweMweya | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Ekukohwa kweMweya
Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Ekukohwa kweMweya
Ipapo akati kuvadzidzi vake: Goho zvirokwazvo iguru, asi vashandi vashoma. 37 Naizvozvo kumbirisai kuna Ishe wemukoho, kuti atumire vabati pamukoho wake.
Wese akazvarwa patsva mukristu anogadzwa kuhwina mweya kuna Mwari. Chikonzero chikuru nei uchiri pasi pano semuKristu ndechekuti kubudikidza newe vamwe vazive Jesu. Vazhinji vanhu varikugara muzvitadzo nhasi nekuti hakuna munhu anovaudza nezverudo rusingaperi rwaJesu. Kunyangwe iwo maChristu mashoma anoedza kuparidza shoko, vanopedzisira voshora vatadzi nekuvaudza kuti vese vanoenda kugehena. Icho hachisi Vhangeri. Semwana waMwari, iwe unofanirwa kuzvipira kuzvinhu zviviri, zvinoti, kuparidzwa kweshoko uye nemunamato. Nhasi tozotarisa pane dzakazotevera, ndanyora makumi mashanu eminamato yekukohwa yemweya. Iyi minamato yeminamato ichaisa nzvimbo yekukohwa kwemweya yemweya muumambo paunenge uchiiteedzera.
Kana tichinamata, isu tinogadzirira moyo isina kuponeswa mweya kuti isviswe neevhangeri. Muchechi yekutanga, vaapositori vakanonamatira kuminamato nehushumiro yeshoko, Mabasa 6: 4. Pasina munamato, izwi raMwari harizovi nemahara pakati pevasingatendi 2 VaTesaronika 3: 1. Minamato ndicho chishandiso chinogadzirisa chikuva chekukohwehwa kukuru kwemweya. Kwatiri kuti tione mweya yakaponeswa enhemes tinofanirwa kunyengetera. Jesu akarara husiku achinamata kanoverengeka uye takaona kuti vanhu vazhinji vakamutevera sei, Vapostori vakapiwa kumunamato uye isu takaona maitiro avo vakatora marudzi kuna Jesu. Nenzira imwechete kana iwe uchida kuona mweya yakaponeswa, kana iwe uchida kuona goho remweya, iwe unofanirwa kupihwa kuminamato. Munamato uyu wekukohwa mweya yemukati uchadambura pasi zvese zvinodzivirira izvo zvisina kuchengetwa zvakakukomberedza kuti uponeswe, zvichaputsa kubatwa kwaDhiyabhurosi pane ikoko kunogara uye shure kwaizvozvo, iwe paunovaparidzira evhangeri, ivo vanopindura nyasha uye vaponeswe.
Idzi pfungwa dzemunamato dzinoshanda kune vamwe uye vafudzi. Kana iwe uchida kuona mashura echechi kukura, ita muminamato iyi. Pinda mariri nokutenda uye netsitsi kune vasina kuponeswa, uchaona goho rakakura kwazvo remweya muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekutumira vamwe vashandi mundima yekukohwa yemweya muzita raJesu ..
2. Baba, muzita raJesu, tipei mweya yese isina kuponeswa iri mumunda wokukohwa mweya yehungwaru uye yekuzarurwa mukuziva Iwe.
3. Nzvimbo yega yega yemuvengi inovharira pfungwa dzemweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wekukohwa kubva pakugamuchira Ishe ngavabviswe pasi, muzita raJesu.
4. Rega zvipinganidzo zvese zvinouya pakati pemoyo wemweya wese zvisina kuponeswa mukati memunda wedu wokukohwa uye vhangeri rinyunguduswe nemoto weMweya Mutsvene.
5. Muzita raJesu, ndinosunga murume akasimba akanamatira kuupenyu hwemweya wese usina kuponeswa uchivatadzisa kugamuchira Jesu Kristu saIshe neMuponesi wake.
6. Ishe, kuvaka ruzhowa rwe minzwa yakakomberedza vatadzi mumunda wekukohwa kuti vatendeukire kuna She.
7. Muzita raJesu, ndinotyora kutuka kwakaiswa pamusoro pemweya yega yega isina kuponeswa mumunda wekukohwa uchivamisa kuti vaponeswe muzita raJesu
8. Iwe mweya werufu negehena, sunungura mweya yega yega isina kuponeswa ino nzvimbo ino !!! muzita raJesu.
9. Chishuvo chose chemuvengi pamweya yevasina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa hachibudirire, muzita raJesu.
10. Ini ndinosungira mweya yega yega yeupofu muhupenyu hwemweya yega yega isina kuchengetedzwa mhiri kwemunda wedu wokukohwa muzita raJesu.
11. Iwe mweya weuranda, unodziya uye wekuparadzwa, sunungura mweya yega yega isina kuponeswa muyambukwa yedu muzita raJesu.
12. Ini ndinosunga murume akasimba anochengetedza mweya yega yega asina kuponeswa pamunda wedu wekukohwa kuti agamuchire vhangeri, muzita raJesu.
13. Nhai baba, kupofumadza kwemweya kubve kubva pahupenyu hwemweya wese usina kuponeswa mhiri kwemunda wedu wokukohwa muzita raJesu.
14. Ini ndinouya kuzopesana nemasimba erima kupofumadza uye ndakabata mweya yega yega yakachengetedzwa kumunda wedu wokukohwa kubva kugashira vhangeri, muzita raJesu.
15. Ini ndinokurayira iwe - mweya wesimba remweya kusunungura kubata kwako pamusoro pemweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa kuitira kuti vagosununguka kugamuchira Jesu saIshe neMuponesi, muzita raJesu.
16. Ndinoputsa nekupwanya nhare dzese dzekunyengera ndichichengeta mweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wekukohwa mumusasa wevavengi, muzita raJesu.
17. Wese mweya isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa ngaibve muushe hwerima uye muushe hwechiedza, muzita raJesu.
18.Ishe, ita kuti chirongwa chako uye chinangwa chehupenyu hwemweya wese wakasarudzika mumunda wedu wokukohwa zvive nesimba muzita raJesu
19. Rega kufungidzira kwese kwakaipa kunopesana nemweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa waoma kubva kunobva, muzita raJesu.
20. O Ishe, ipai mweya yega yega yakaponeswa pamunda wedu wokukohwa chiratidzo chakashomeka chinovaendesa kuna Jesu, muzita raJesu.
21. O Ishe, bvisai moyo wedombo wemweya wese usina kuponeswa mhiri kwemunda wedu wokukohwa uye uvape moyo wenyama muzita raJesu.
22. Masimba ese anotsigira zvisarudzo zvakaipa anorwira mweya yega yega asina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa ngaanyadziswe, muzita raJesu.
23. Ngwarirai mweya wega wega waKora, Dhatani naAbhiramu vari kurwisa mweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa ngavaputswe, muzita raJesu.
24. Rega rima rega rima rinoshanda rinopesana nemweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa uwire pasi pechirongwa chaBharami, muzita raJesu.
25. Wese mweya wekushungurudzika ngaushande kumweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa gamuchira mabwe emoto, muzita raJesu.
26. Wese mweya weEjipitosi unopesana nemweya yega yega yakaponeswa pamunda wedu wokukohwa uwire pasi pekurayira kwaFarao, muzita raJesu.
27. Rega mweya yega yega yekudada ngaidzivirire mweya yega yega isina kuchengeteka pamunda wedu wokukohwa kuti vagamuchire vhangeri kunyadziswa, muzita raJesu.
28. Wese munhu akasimba muhupenyu hwemweya yega yega asina kuponeswa mhiri kwemunda wedu wokukohwa atore matombo emoto, muzita raJesu.
29. Wese mweya waFarao uchipokana neruponeso rwemweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa uwire mugungwa Dzvuku ravo ravo, muzita raJesu.
30. Nguo dzese dza satan dzinopesana neiyo ino endeswa mweya yega yega yakaponeswa pamunda wedu wokukohwa ngaivhiringidzwe, muzita raJesu.
31. Baba, Vatumwa vako ngavatsvagire munda wedu wokukohwa, vachinyora mweya mizhinji muhushe muzita raJesu.
32. Baba, regai mweya mutsvene, ishe wavo wekukohwa utsvaire pamunda wedu wekukohwa uchinyora muzhinji kupinda muumambo muzita raJesu.
33. Baba, neropa rako, tinopesana namasuwo egehena akamira achipesana neruponeso rwemweya wese usina kuponeswa mhiri kwemunda wedu wokukohwa muzita raJesu.
34. Baba, fema mweya wehupenyu pamawoko edu, mafirita, maturakiti apo patinoenda kunokohwa mweya muzita raJesu.
35. Vapi vekupa zano vese vakaipa vanoodza mweya yega yega isina kuchengetedzeka kumunda wedu wekukohwa frkm acepting jes mukati imomo vanogara vakaomeswa nemoto nemuzita raJesu.
36. Imi vadyi, nyangarika kubva kuhupenyu hwemweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wokukohwa, muzita raJesu.
37. Ini ndinosunungura mweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wekukohwa kubva muhusungwa hwese hwaSatani, muzita raJesu.
38. Ndinobvisa simba rekutukwa kwese kuri pamusoro pemweya wese usina kuponeswa pamunda wedu wekukohwa, muzita raJesu.
39. Ini ndinoraira kusvibiswa kwemweya wese muhupenyu hwemweya yega yega isina kuponeswa pamunda wedu wekukohwa kuti ugamuchire kucheneswa neropa raJesu, muzita raJesu.
40. Rega bhurasho raIshe ripurire tsvina yega neipi tsvina mukati mehupenyu hwemweya wese usina kuponeswa pamunda wedu wekukohwa, muzita raJesu.
41. Baba, shoko renyu ngarive rakasununguka pakati pevakaponeswa muzita raJesu
42. Baba, sezvo isu tichiparidza izwi renyu kune vasina kuponeswa, simbisai nezviratidzo nezvishamiso muzita raJesu
43. Baba kuraira nhanho dzedu kubindu rakakohwehwa muzita raJesu
44. Baba, isai iwo mazwi akakodzera mumuromo medu apo isu tinonamatira vasina kuponeswa muzita raJesu
45. Baba, patinobuda, tinosunga mweya wega wekupokana nemagwaro muzita raJesu.
46. ​​O Ishe, ndipeiwo shungu uye tsitsi kune vasina kuponeswa muzita raJesu.
47. Baba patiri kuenda kunoporesa varwere kubudikidza nesu muzita raJesu
48. Baba apo patinoenda tinodzinga madhimoni kuburikidza nesu muzita raJesu.
49. Baba tinokutendai nekutipa kukunda kwedu mumunda wokukohwa muzita raJesu.
50. Baba, maita basa nekukohwa kwemweya.
Previous nyayaMinamato makumi matatu Ekutungamira Mukuita Sarudzo
inotevera20 minamato ine simba Pamusoro pehupombwe
Maka Matsane Kurume 26, 2021 At 8:15 pm
Mbiri kuna Mwari Munhu waMwari
Bridget Welch Chikumi 7, 2021 Panguva ya1: 06 pm
Iyo minamato inonzwika sezviito
Regedza kunhonga vana vaMwari
Tinounganidza iye anoronga
Handikutye mweya wangu ndewaJesu
Kwete rimwe boka re
Kuva nemhosva manzwiro anotyisa
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI ZVEKUSVIRA ZVESE